Hevitra mandalo : Resaky ny mpitsimpona akotry | NewsMada
Hevitra mandalo : Resaky ny mpitsimpona akotry
Haingo avadika ho fitafy malailay
Maneno mahafinaritra ao an-tsofina anie ny fahenona an’izany hoe fanomanana lalàna mikasika fanenjehana sy fanamelohana an’izay nanao harena maizi-pototra na hoe vokitry ny fahalotona mihitsy aza. Ny resaka mandeha moa dia manakoako toy izany mitatitra an’izao fosafosa sy endrikendrika isan-karazany izao atao fanasoketana ny tompo-pahefana maro na ny teo aloha na ireo amperinasa, araky ny feo malaza eo amin’ny firaisa-monina dia tsy mila porofo firy akory iapangana azy ireny ho nandroba harena, lany henatra ary tsy misy tahotra akory tokoa ry zalahy raha ideradera sy isitraka ny fananany mamirapiratra fa maloto fihavina.
Tsy toy izay anefa ny fahafalina raha vao mandinindinika an’ireo tetika fonosin’ilay lalàna kasaina atolotra ho dinihana ao amin’ny Antenimierampirenena. Eo am-piandohana dia mibaribary ny tetika nahatonga ny fikotrehana an’ity lalàna ity, ny fomba ahafahana amingana an’ireo mpanao pôlitika mikasa ifaninana amin’izay eo amin’ny fitondrana.
Aiza moa raha ny olona hara-maso (ny ao amin’ny fitondrana) indray no afaka anampatra fahefana amin’ny fanenjehana an’izay olona tiany ho endrikendrehana. Lasa hery famolahana tsy ara-drariny ilay lalàna. Afaka apangaina avokoa izay tsy tiana tarehy na izay mitady anelingelina. Vao miha maha mari-potitra an’izany ny fijerena ny fahatomoran’ny fifidianana. Tsy ifanafenana intsony moa fa fananam-bola no ifaninana amin’ny fampielezan-kevitra, resaka fotsiny ity hoe demôkrasy ity. Ny vola entina ifaninana no mendrika asina fetra eo amin’izay tokony ho rariny. Ny vola be anie efa any ampelatanan-drizalahy fa tsy tiany ho feperana, ny tetika dia raha lany ity lalàna ity dia ho kaofina ny an’ny sasany amin’ny alalan’ny fiapangana ny vola sy fananany ho harena maloto fihavina. Ivelan’izay hoe ho fanadiovana ny lalao eo amin’ny Fifidianana sy hiverenana amin’ny demôkrasy ny vola enti-miady no mendrika asina fetra, dia mbola miverina indray amin’ilay fihetsiketsehana tsy mamokatra eo amin’ilay fitakina “fanambarana harena rehefa mandray andraikitra”. Hany ampangarahara ny tena fahadiovan’ny olona teo amin’ny fitondrana dia ny fanaovana sava hao ny fitombon’ny harenany, izany tsy ho tratra raha toa tsy misy ny fanadihadina manara-peritra ampitaha ny fananany tany amboalohany sy ny fananany eo amin’ny fotoana fialany. Samy matahotra an’izay na ny tany aloha na ny ankehitriny.